यी हुन् डेब्यु वनडेमा नेपालले बनाएका केही रेकर्डहरु
प्रकाशित मिति : August 3, 2018
काठमाडौं । पहिलो खेलमा जे जे हुन्छ त्यो सबै कीर्तिमान हुन्छ । नेपाल र नेदरल्याण्ड्सबीचको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले जे जे बनायो त्यो सबै कीर्तिमान बनेको छ । त्यो पनि कसैले नतोड्ने कीर्तिमान ।
गत वर्षको चैतमा नेपालले चार वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय खेल्ने अवसर पायो । त्यसपछि नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल नेदरल्याण्ड्ससंग खेलेको हो ।
नेपालले १९० रनको चुनौती पूरा गर्न नसक्दा हार बेहोर्नु पर्यो । नेपालले ४१.५ ओभरमा अलआउट हुँदै १३४ रनमात्र जोड्न सक्यो ।
दुई खेलको श्रृंखलाको दोस्रो खेल शुक्रबार (साउन १८ गते) हुनेछ ।
पहिलो खेलमा के के कीर्तिमान बन्यो त ?
१, यी हुन् पहिलो डेब्यु खेलेर कीर्तिमान रचेका खेलाडीहरु – कप्तान पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, अनिल कुमार शाह, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, बसन्त रेग्मी, शक्ति गौचन, करण केसी, सन्दीप लामिछाने र शरद भेषावकर ।
२, नेदरल्याण्ड्सले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै ४७.४ ओभरमा अलआउट हुँदै १८९ रन बनायो । नेपालले ४१.५ ओभर खेलेर १३४ रन बनायो । अर्थात् दुवै इनिङमा कसैले पूरै ५० ओभरको खेल खेलेन ।
३, सोमपाल कामीले पहिलो विकेट लिए । सोमपालले अहिलेसम्म कसैले पनि तोड्न नसक्ने कीर्तिमान रचे । उनको नाममा यो अविश्मरणीय रह्यो । सोमपालले ३ विकेट समेत लिए ।
४, पारस खड्काले बेष्ट बलिङ गरे । २६ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । सन्दीप लामिछाने, करण केसी र बसन्त रेग्मीले १–१ विकेट लिए । ६ बलरमध्ये शक्ति गौचनमात्र विकेट लिन असफल रहे । ४ ओभरमा १५ रन लिएका शक्तिले सन्यासको घोषणा गरिसकेका छन् ।
५, ब्याटिङमा नेपालले पहिलो विकेटका लागि कीर्तिमानी साझेदारी गर्यो । सिनियर टिमले यसअघि यति राम्रो प्रदर्शन विरलै गरेको थियो । पहिलो विकेटका लागि ५८ रनको साझेदारी गर्ने क्रममा उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ५१ तथा अनिलकुमार शाहले २१ रन बनाए । ज्ञानेन्द्रले अर्धसतकको कीर्तिमान बनाए ।
६, हारको कीर्तिमान पनि बन्यो । नेपालले ५५ रनको हार बेहोर्यो । यो पनि कहिल्यै मेटिने छैन ।
७, सात खेलाडीले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् । त्यसमध्ये चार खेलाडीले रन नै जोड्न सकेनन् । आरिफ शेख, सोमपाल कामी, बसन्त रेग्मी र करण केसी ‘०’ मा आउट भए ।
८, बलरहरुमा सबैभन्दा बढी बल शक्ति गौचनले खेले । शक्तिले ४४ बल खेले । उनले ९ रन बनाए । शक्ति नटआउट रहने कीर्तिमान बनाउन सफल रहे ।
हरारेमा अष्ट्रेलियाले जिम्बावे बिरुद्ध बनायो यी रेकर्डहरु
जिम्बावे बिरुद्ध आरोन फिन्चले बनाए टि-२० मा ब्यक्तिगत सबैभन्दा धेरै रन
वनडेमा इंग्ल्याण्डले बनायो सबैभन्दा ठूलो रनको रेकर्ड
शाकिब बने १० हजार रन बनाउने र ५०० विकेट लिने विश्वकै तेस्रो खेलाडी
एकदिवसीय क्रिकेटमा २१ बर्ष पुरानो रेकर्ड तोडियो ! के हो त्यो रेकर्ड ? हेर्नुस्